Inty sy Nday : Fanjakan’ny dahalo
Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY Inty sy Nday : Fanjakan’ny dahalo
Ny olona ve no lasa adala sa ny fanjakana no tsy mahavita ny asa tokony hataony intsony? Mbola tsy nisy zavatra toa izao teto Madagasikara hoy ny olona rehetra izay miteny. Raha vao miala ny renivohitra eto Antananarivo dia ny dahalo no manao ny lalàna sy mibaiko. Tena tsy hita intsony izay làlan-kaleha hoy ny fitenenana fa toa ny mpamily fiarakodia vaventy feno entana ny fiainam-pirenena ka midina fidinana mitaitaina ary miakam-piakarana mbola mitaintaina foana. Amin’ny andro antoandro dia dahalo sy ny jiolahy tsy miafina intsony fa manafika izay olona manambola sy mana-karena hoy ity olona iray. Ny olona iray hafa nefa dia nanamafy fa tsy ny mpanakarena ihany no voatafika ankehitriny fa hatramin’ny tsy manambola sy ny mahantra koa. Firy tokoa moa izay fanafihana nitranga izay ka olona tsotra izao no voatafika sy maty manerana an’i Madagasikara. Dia mbola nitohy hatrany ny ady hevitra nataon’ireto olona roalahy ireto ka nilaza indray ity iray fa angaha ny olom-belona ihany no voaroba ankehitriny e! Tsy hay tenenina intsony ange ny vaky fasana ankehitriny e! Ny maty ao ampasana dia voaviravira sy tsy omena hasina intsony ankehitriny. Vorahina ny lamba mena na ny lambam-paty dia akorontana izay tsy izy ny taolam-paty. Nahagaga ange ny fahenoina fa nisy namaky ny fasan’i Pasitera Andriamanjato Richad, ka tsy nisy zavatra nalainy tao fa ny lamba notafiany no nakorontany. Noheveriny fa misy vola sy firavaka angamba ka saika mbola hanendaka izany ireto jiolahy ireto. Ny taolam-balo izay faheno sy hita matetika fa misy mpangalatra dia tsy nisy nihetsika. Sa angaha hangalatra ny baibolin’i Dadapasy ry zalahy ireny? Tsy hay intsony fa dia fanjakan’ny jiolahy sy ny dahalo no misy amin’izao fotoana izao e!
Izany no zavatra misy manodidina an’Antananarivo fa mba ahoana indray ity any ambanivohitra e! Mandeha tongotra ianao matahotra sy mijaly satria tsy vitan’izany ny fiainana ary efa tsy nozarina izany intsony. Mandeha taxi-brousse na fiarakodia indray ianao dia matahotra fanakan-dàlana indray. Firy moa no fiarakodia voatafika izay e! Ny làlam-pirenena malaza rehetra, toa ny faha -7 izay mampitohy an’Antananarivo sy Toliara, làlam-pirenena faha 34, 35 Ambatofinandrahana sy Miandrivazo mihazo an’i Morondava, ary ny làlam-pirenena faha 4 izay mandeha any Mahajanga. Tsy tenenina intsony ny amin’ny sakeli-dàlana rehetra any satria dia zava-doza tanteraka no ataon’ireo mpanakan-dàlana. Firy moa no fiarakodia potika sy olona maty izay. Tena fanjakan’ny baroa tanteraka no misy eto e! Tsy hita izay ataon’ny fanjakana amin’izany fa lany andro miaro seza eto Antananarivo fotsiny ka rehefa maneho hevitra ny mpanao politika sy ny sendika ary ny olona tsy mahazaka ny tsy fahaiza mitantana ataon’ny fanjakana dia avoaka hatramin’ny basy marovava isan-karazany izao no ataon’ny “emmo-reg”. Miaramila an-jatony maro no indray hetsehina amin’izany.
Dia mbola mitohy hatrany ny resak’ireto olon-droa mitafa ny zavatra misy ankehitriny ka niafara tamin’ny asan-dahalo ka hoy izy ireo hoe “ mbola misy fanjakana sy mpitondra ve any Ambatofinandrahana any sy Ambohimahasoa ary Ikalamavony? Mba henonao ve ny ao Betafo ka hatrany Malaimbady izay mandalo ao Miandrivazo ka hatrany Morondava? Ny dahalo anie no manjaka any amin’iny toerana iny. Tsy tenenina intsony ny ao Ankavandra sy ny faritra i Melaky manontolo. Miara monina ange ny dahalo sy ny mpitandro ny filaminana ary ny olo-tsotra amin’ireny toerana ireny ka ny dahalo indray no mifehy ny tanàna amin’izany. Tsy afaka manao na inona na inona intsony ireo mpitandro ny filaminana ireo e! Avelao hajanona eo aloha ny resaka ramose fa amin’ny manaraka indray tohizana fa fanjakan’ny dahalo ange no misy eto Madagasikara amin’izao andron’ingahy Hery Rjaonarimampianina izao e!
Assistance pour l’Akamasoa : Elle ne demande aucun privilège
Démenti de la primature : Qui a cru ?
Marasme économique : Les banques sont aussi frappées
Crédits : Les emprunts familiaux restent les plus envisagées
La plus grande escroquerie : politique de notre histoire
Pédagogie : Le profil d’un bon enseignant
Lutte contre l’insécurité : Les forces de police se mobilisent
Recherches en électronique à Ankatso : Un potentiel caché
Opportunité inouïe pour les jeunes : Formation en Journalisme
Inclusion financière : En pleine élaboration
Objectif faim zéro : Un processus participatif
Pour les populations vulnérables : Un Programme de Fortification Alimentaire
Secteur pêche : Les pêcheurs prennent leur destin en main
Soins médicaux : La couverture de santé universelle serait primordiale ?
RAJAONANAHARY Max Olivier
RAKOTOSOLOFO RAVONIARISOA Danielle Harivelo
Honorine Beby RAZANATSEHENO teraka RATSISALOVANINA
RAVAOARISOA Marie Geneviève